နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)လွန်ကာလအတွက် – mbc-1813.org
ပြန် လည် သုံး သပ် ခြင်း
(Missionary Church and Witnessing Members) အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ တမန်၊၁း၈။ ၁ပေ၊၂း၉။ ယော၊၁၇း၃။ ၁တိ၊၂း၄။ မာကု၊၁၆း၁၅။ ယော၊၁၀း၁၀။မသဲ၊၂၈း၂၉။
၁။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျှက်၊ဆုတောင်းသောအသင်းတော်(Praising and Praying Church)။
(ထွက်၊၁၄း၈)အရဤသရေလလူမျိုးများကျွန်ခံရာအဲဂုတ္တုပြည်မှကျော်ဖြတ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမည့်အစားဝါကြွားခြင်း၊အချင်းအရာများ နှင့်အစပြုခြေလှမ်းများပြုခဲ့သဖြင့်အန္တရယ်၊ ပြသနာပင်လယ်ပြင်နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့်သင်ခန်းစာရှိပါသည်။မိမိတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများအားဝါကြွားနေရန်မဟုတ်ပါ။ဘုရားလုပ်ပေးခဲ့သမျှအား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါသည်။ချီးမွမ်းခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင်သစ်လွင်လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတို့ဖြင့်တာဝန်သစ်တစ်ရပ်အားထမ်းဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ် နေသာအနေအထားတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဣသရေလလူမျိုးများပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းအရာများတွင် ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ အစွမ်းသတ္တိ၊သီချင်းဆိုရာ၊ကယ်တင်သောအရှင်၊စစ်သူရဲဟု ဖေါ်ကျူးထားခြင်းကို(ထွက်၊၁၅)တွင် တွေ့မြင်ရပါသည်။အတိတ်ကဘုရားနှင့်သွားလာလုပ် ဆောင်ခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံများအရယခုပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အတွက်ဘုရားမပါပဲသွားလာလုပ်ဆောင်ရန်မည်သို့မျှမဖြစ်နိုင်မှန်းသိခြင်း၏တစ်ခုတည်း သော လက္ခဏာမှာဆုတောင်းခြင်းအသက်တာပင်ဖြစ်ပါသည်(၁သက်၊၅း၆)။သက်သေခံသောယုံကြည်သူများနှင့်သာသနာပြုသောအသင်းတော်အဖြစ် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရန်အလို့ငှာ နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)လွန်တွင် အသင်းတော်များသည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသော ယုံကြည်သူများနှင့် ဆုတောင်းသော ယုံကြည် သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအသင်းတော်အဖြစ်ရပ်တည်ကြရပါမည်။
တနည်းအားဖြင့် တင်စားဖေါ်ပြရမည်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျှက်၊ ဆုတောင်းသောအသင်းတော်သည် “နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)လွန် အတွက် သာသနာယဇ် (သို့) ယဇ်ပလ္လင်တစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါသည် (ယဇ်ပူဇော်ခြင်း=အသက်ပေးပူဇော်ခြင်း)။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ညီမျှခြင်းအရ (Praising+Praying=Sacrifical..Offering) ယဇ်ပူဇော်ခြင်း(သို့)ယဇ်ကောင်ဆိုသည်မှာ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း(Retaking to righteous position = Sacrifi cal Offering) upright position ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်တစ်ခုတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ(Persons)၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ(Positions)၊ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းအားများ(Power)၊ စီမံကိန်းများ(Plans)၊ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် အစီ အစဉ်များ(Programs)၊အထူးစီမံချက်များ(Projects)၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှာနေသောပုံရိပ်(အသွင်သဏ္ဍန်)များ (Performances)ရှိနေရပါမည်။ ယင်းတို့သည် အသင်းတော်၏ကျန်းမာသန်စွမ်းနေကြောင်းကိုပြသောသက်သေများပင်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသင်းတော်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခေါင်းဆောင်များ၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အသင်းသူ/သားများ၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အမှုတော် ဆောင်ခြင်း/သာသနာပြုခြင်းဖြစ်ရပါမည် (HealthyChurch=HealthyLeaders+HealthyMembers+Healthy..Ministry(or)Mission)” ။
လူမှုဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်လည်း ကျန်းမာသောသူများသာလျှင်ထိုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အင်အားရပ်ဖြစ်ကြပါသည်။ မကျန်းမာသောသူများသည် ယင်းလူမှုဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် လူပိုများဖြစ်သကဲ့သို့ကျန်းမာသောအသင်းတော်များသာလျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် အင်အားစုဖြစ် သည်။ တနည်းဆိုသော် မကျန်းမာသောအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များ၊ မကျန်းမာသောအသင်းသား/သူများနှင့်မကျန်းမာသောသာသနာ့လုပ်ငန်းများ
ထို့ကြောင့်နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)လွန်တွင် အသင်းတော်တိုင်းသည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျှက် ဆုတောင်းသော အသင်းတော်များအဖြစ် လည်းကောင်း၊သက်ဝင်ရှင်သန်သောသက်သေခံယုံကြည်သူများနှင့်သာသနာပြုသောအသင်းတော်များအဖြစ်လည်းကောင်းတည်ဆောက်လျှက်ရပ်တည် ကြရမည်။
၂။လောကီခရီးတာအား၊ ၀ိညာဉ်ခရီးတစ်ရပ်အဖြစ် ခံယူတည်ဆောက်ကာ ခရီးပြုနေသောဝိညာဉ်ခရီးသည်
(Spiritual Journey and SpiritualTraveller (ဧဖက်၊၁း၃)။
နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြားကာလဖြစ်သကဲ့သို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ကြံုတွေ့ဖြတ်ကျော် ရမည့် ၀ိညာဉ်ခရီး (SpiritualJourney)ပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ပျက်ညဉ်းငြူဖို့ရန်မဟုတ်ပါ။ ရင်ဆိုင်၊ ဖြတ်ကျော်၊ ပြင်ဆင်၊တည်ဆောက် သွားရန်သာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများချုပ်နှောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိနေသောအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ခွာလာခဲ့သည်ဟုဆို သော်လည်း လှိုင်းတံပိုး၊အန္တရယ်
ကြီးမားသောပင်လယ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ထို့အတူဖျက်ဆီးမှုများ၊ ယော်ဒန်မြစ်၏အားသန်သောရေစီးကြောင်းများကိုလည်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရပါသည်။ သို့ပြီးမှသာ ကတိတော်နှင့်ဆိုင်သောခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခဲ့ကြရပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအလားတူခရီးမျိုးဖြတ်ကျော် ကြရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၀ိညာဉ် ခရီးသည်နှင့် ၀ိညာဉ်ခရီးလမ်းဟုသိမြင်၊နားလည်၊သည်းခံလုပ်ဆောင်သွားကြရပါမည်။
(၁)အာရုံခံစားလျှက်၊စင်ကြယ်ခြင်းရှိရမည်(Purification of the Sense)
(၂)စိတ်ဝိညာဉ်စင်ကြယ်ခြင်းရှိရမည်(Purification of the Soul)
(၃)၀ိညာဉ်စင်ကြယ်ခြင်းရှိရမည်(Purification of the Spirite
(၅)ခရစ်တော်၌တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိရမည်(Union with Christ
(၆)သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊သိုမှီးမှုရှိရမည်(Acquisition of the Holy Spirit
(၇)နက်ရှိုင်းသောပေးကမ်းစွန့်ကျဲမှုများသိို့ရှေ့ရှုရမည်(Heading toward the depth the Charity
(၈)ခရစ်တော်၏အလိုတော်အားကြီးမှု၌ပါ၀င်အသက်ရှင်ရမည်(Participation in Christ’s passion
(၉)ညီအစ်ကိုများအတွက်အသက်ပေးနိုင်ရမည်(Giving one’s life to his brothers)
၃။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောအသင်းတော်၏လက္ခဏာ(၉)ပါး(The nine marks of Healthy Church)။
(၁) ဟောပြောခြင်း(Preaching) သမ္မာတရားကိုသိသဖြင့် ထိုတရားသည် သင့်ကိုလွှတ်လိမ့်မည်(ယော၊၈း၁၂)အရ တရားပလ္လင်သည် ခံစားချက်ဟစ်တိုင် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်စီးဆင်းရာစမ်းရေတွင်းဖြစ်ရမည်။ လူမှုရှုဒေါင့်မျိုးစုံ၏အဖြေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်် ဟောပြောကာ အဖြေပေး ရမည်။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (ဒေသနာ၊၁း၁။ဆာလံ၊၄၀း၉။ ဟေရှာယ၊၆၁း၁။ နေဟမိ၊၆းရ။ ယောန၊၃း၂။၁တိ၊၂းရ။မသဲ၊၃း၁။ ရောမ၊၁၀း၁၄)။
(၂)ပြောင်းလဲခြင်း(Conversion) လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်ကာ ဟောင်းသောအရာများပြောင်းလဲပြီး ခပ်သိမ်း တို့သည် အသစ်ဖြစ်စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်(၁ကော၊၅း၁၇)။ အဟောင်းများဖြင့် အသက်ရှင်နေသ၍ သက်သေခံသောယုံကြည်သူ မဖြစ်လာနိုင်ချေ။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (တမန်၊၁၅း၃။ ယာ၊၅း၁၉၂၀။ ဆာလံ၊၅၁း၁၃။ ဟေရှာယ၊၁း၂၇။ ဟေရှာယ၊၆း၁၀။ လု၊၂၂း၃၂။ တမန်၊၃း၁၉။ ဟေရှာယ၊၆၀း၅။ မသဲ၊၁၃း၁၅။ မသဲ၊၁၈း၃။မာကု၊၄း၁၂။ ယော၊၁၂း၄၀)။
(၃)စည်းကမ်းရှိခြင်း(Discipline) စည်းကမ်းနှင့်တန်းဖိုးသည် ညီမျှခြင်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းရှိလျှင်တန်ဖိုးရှိမည်၊ စည်းကမ်းနည်းလျှင် တန်ဖိုး နည်းမည်၊စည်းကမ်းကောင်းလျှင်တန်ဖိုးကောင်းမည်။ လောကဓမ္မတာတရားထက် လောကုတ္တရာအကျိုးအလို့ငှာသိပ်သည်းကျစ်လစ်စွာအသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (ယောဘ၊၃၆း၁၀။ ၂တိ၊၁းရ။ ၂တိ၊၃း၁၆။ ဟေဗြဲ၊၁၂း၅၊၇၊၈၊၁၁။)
(၄)သမ္မာကျမ်းစာဓမ္မအခြေခံသဘောတရားများ (Biblical Theology) အသိတရားကြွယ်ဝသောခေတ်ထဲတွင် လှေနံဒါးထစ် တစ်ယူသန်၊ အယူစွဲ အစွန်းရောက်များကြောင့် ပြသနာရှင်းနေရခြင်းဖြင့်သာ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်သောဖြစ်ရပ်နှင့် အခြေအနေများစွာ ရှိနေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအခြေခံသော ကျယ်ဝန်း နက်ရှိုင်းသည့်ဓမ္မသဘောတရားများကိုလေ့လာ၊သိရှိ၊နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Biblical Theology asaScience;
(၅)ဧဝံဂေလိလုပ်ဆောင်ခြင်း(Evangelism) လမ်းခရီး၊သမ္မာတရား၊အသက်ဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုကို လူသားများတို့အားမိတ်ဆက်ပေးရမည်မှာ ခရစ်ယာန်များအတွက်မဟာဘုရားပေးတာဝန်ပင်ဖြစ်သည်(ယော၊၁၄း၆။ ၁တိ၊၂း၄)။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (လုကာ၊၂၀း၁။ ဂလာတိ၊၃း၈။ ရောမ၊၁း၁၅။ တမန်၊၂၁း၈။ ၂တိ၊၄း၅။ တမန်၊၈း၄။ ဧဖက်၊၄း၁၁)။
တော်စစ်ဖြစ်ခြင်းအတွက် စနစ်တကျ၊ ပြုစုပျိုးထောင်၊ တည်ဆောက်ပေးဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းကိုတပည့်တော်စစ်ဖြစ်ခြင်း (Discipleship)ဟုခေါ်ပါ သည်။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (မသဲ၊၁၀း၂၄။လုကာ၊၆း၄၀။မသဲ၊၉း၁၄။လုကာ၊၇း၁၈။ ယော၊၃း၂၅။မသဲ၊၂၂း၁၆။မာကု၊၂း၁၈။လုကာ၊၅း၃၃။ယော၊၉း၂၈။ တမန်၊၆း၁၂၊၇။တမန်၊၁၄း၂၁။ မသဲ၊၁၃း၅၂။ ၅၇ာ၊၂၅း၈။ ၁ရာ၊၁၉း၂၀။ ၄ရာ၊၆း၅)။
(၇)သတင်းကောင်းဖြစ်ခြင်း(The Gospel) အသစ်သောအသက်တာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထိမိ၍လဲစရာများမဖြစ်စေပဲတည်ဆောက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေ
သဖြင့် မြင်မြင်သမျှ၊ကြားကြားသမျှသည်သတင်းကောင်းဖြစ်နေပါသည်။ ကောင်းသောပုံသက်သေ၊ကောင်းသောသက်သေခံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ငြင်းဆန်လှစ်လျှူရှု၍ပင်မရလောက်အောင်ထူးခြားသောပုံသက်သေရှိပါသည်။အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (မာ၊၁း၁။ တမန်၊၂၀း၂၄။ ရောမ၊ ၁း၁၆။ ကမ္ဘာ၊၃း၁၅။ ၁သက်၊၂း၂၉။ ၁တိ၊၁း၁၁။ ရောမ၊၁၅း၁၉။ ၁ကော၊၉း၁၂၊၁၈။ ဂလာတိ၊၁းရ)။
(၈)အသင်းသူ/သားဖြစ်ခြင်း(Membership) အခြေခံအဆောက်အအုံသည် အခြေခံကေျသာ မိသားစုမှတဆင့် အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံအထိ ရှင်သန်သက်ဝင်နေသူများသည်လူသားများပင်ဖြစ်သည်။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှဟင်းလင်းလေဟာပြင်တွင်တစ်ကိုယ်ရည်စွှမ်းအားဖြင့်အသက်ရှင်၍မရချေ။ အသင်းတော်သည် ဘုရားအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းတော်တွင် အသင်းသူ/သားများအဖြစ် သဟဇာတကျစွာ၊ ဟန်ချက်ညီညီဖြင့် ရှင်သန်လှုပ်ရှားမှုရှိနေရပေမည်။ အသင်းသူ/သားဖြစ်ခြင်း(Membership)ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် လူမှုယန္တယားကို ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ယန္တယားနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ပေးရသည့်အလွန်အရေးပါသောအဆောက်အအုံပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (တရား၊၂၃း၁။ ယာ၊၃း၅။ ဆာလံ။ ၁၃၉း၆။ ရောမ၊၆း၁၃-၁၉။ ရောမ၊၂၇း၂၃။ ယာ၊၄း၁။ ၁ကော၊၆း၁၅၊၁၉၊၂၀။ ကော၊၃း၅။၁ကော၊ ၁၂း၁၂-၂၇)။
(၉)ခေါင်းဆောင်မှု(Leadership) သိုးထိန်းမရှိလျှင် သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်နေသောသိုးများဖြစ်ပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူမှုယန္တရားနှင့် ဘုရားသခင်
နိုင်ငံတော် ယန္တရားတို့အား အချိတ်အဆက်ပြုပေးသည့်အသင်းတော်တွင် ဓမ္မအသိတရားများကြွယ်ဝမှု၊ လူမှုအားနည်းချက်များအား နားလည်ခြင်း ကြွယ်ဝကုံလုံသောအသက်တာထဲ၌ကျက်စားနိုင်ခြင်း(စိမ်းလန်းသောကျက်စားရာအရပ်)ထာဝရအသက်ကိုပိုင်နိုင်စွာဆုပ်ကိုင်၍အောင်မြင်သောအသက်တာလမ်းတွင်အသက်ရှင်ခြင်းငှာ လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှုပြုပေးနိုင်သောသူပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို ကြိုသိပြီး၊ အန္တရယ်သတိပေးမှု၊ ကာကွယ်မှု၊ ၀ပြောမှုတို့အတွက်တည်ဆောက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ အခြေပြုကျမ်းချက်များ။ (ယေဇကျေ၊၂၇း၁၂။ တမန်၊၂၇း၂၈။ ထွက်၊၁၅း၁၀။ ယောဘ၊၁၉း၂၃-၂၄။ မာလခိ၊၃း၂-၃။ ဆာလံ၊၂၃)။
နှစ်ခြင်းသာသနာနှစ်(၂၀၀)လွန် ဒုတိယ(၁၀)စုနှစ်သည် စိန်ခေါ်ချက်ကြီးမားခြင်းကြောင့်စိုက်ထုတ်မှုအားလည်း ကြီးမားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းတိုင်မျှော်မှန်းချက်သည်လည်း အလွန်ကြီးမားခြင်းကြောင့် ပန်းတိုင်သို့အရောက် တက်လှမ်းကြရပါမည်။ ခြေလှမ်းများသည်လည်း ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သလို၊ အင်အားရှိဖို့ရန်လည်းအထူးပင် လိုအပ်ပါသည်။
Tokyo Kachin Baptist Church
© 2017 Myanmar Baptist. All Rights Reserved.
Developed by Chalk & Slate